Jovago.net နှင့်အတူ အာရှမှာ ဘိုကင်ပြုလုပ်လိုက်ပါ | ဈေးနှုန်း၊ သုံးသပ်ချက်များနှင့် လျော့ဈေးများ
Click တစ်ချက်ဖြင့် အကောင်းဆုံးဟိုတယ်ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ
ဟိုတယ် ဘိုကင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
တွင်ရှိသောဟိုတယ်များကို ဘိုကင်တင်ရန် Murree
တွင်ရှိသောဟိုတယ်များကို ဘိုကင်တင်ရန် Islamabad
တွင်ရှိသောဟိုတယ်များကို ဘိုကင်တင်ရန် Lahore
တွင်ရှိသောဟိုတယ်များကို ဘိုကင်တင်ရန် Cox's Bazar
တွင်ရှိသောဟိုတယ်များကို ဘိုကင်တင်ရန် Yangon
တွင်ရှိသောဟိုတယ်များကို ဘိုကင်တင်ရန် Karachi
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ဟိုတယ်တွေကို ကြည့်မယ်
အထူးဈေးနှုန်းများ နှင့်အတူ သိရှိလိုပါက Jovago သတင်းကို စာရင်းသွင်းပြီး ရယူလိုက်ပါ
တည်းလိုသည့် ဟိုတယ်ကို ရှာပါ။
သွားမည့်နေရာ၊ နေထိုင်မည့်ဟိုတယ်၊ နေထိုင်လိုသည့်ရက် နဲ့ တည်းခိုမည့်သူအရည်အတွက်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာလိုက်ပါ။
ဟိုတယ်ရဲ့ ကြယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဈေးနှုန်း၊ နေရာ ဒါမှမဟုတ် လူတွေရဲ့ နှစ်ခြိုက်မှုကို ကြည့်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာသင်အနှစ်ခြိုက်ဆုံးနေစရာနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးဈေးကို ရရှိဖို့အာမခံပါတယ်။
ယခု ဘိုကင်လုပ်ပြီး နောက်မှပေးချေပါ။
ယခုပဲ ဘိုကင်တင်လိုက်ပါ။ ဟိုတယ်ရောက်မှပေးမလား အွန်လိုင်းကနေပေးချင်လား၊ ကြိုက်တာရွေးချယ်လို့ ရပါတယ်။ အထုတ်ပိုးပြင်လို့ရပြီလေ ၊ သင့်အခန်းက သင့်ကို စောင့်ကြိုနေပြီ။
Jovago နဲ့အတူ ဟိုတယ်တွေကိုဘိုကင်လုပ်နိုင်ပါပြီ- အာရှတစ်လွှားရှိဟိုတယ်များကိုအွန်လိုင်းမှအခမဲ့ဘိုကင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်
သင့်တော်တဲ့တည်းခိုစရာနေရာရှာမတွေ့မှာစိုးရိမ်နေလား ဒါမမှဟုတ် ရွေးချယ်ရခက်နေပါသလား?ကျွန်တော်တို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ ကမ္ဘာအနှံ့ဟိုတယ်နှင့်တည်းခိုးခန်း အလုံး 200,000 ကျော်ကိုတစ်နေရာတစ်တည်းမှာရှာဖွေနိုင်ပါပြီ။
Jovago.comမှာ အာရှဒသရှိ အကောင်းဆုံးဟိုတယ်တွေကိုရှာဖွေနိုင်တာကြောင့် အပန်းဖြေခရီးသွားတာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊အလုပ်ကိစ္စနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်သင့်လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့တည်းခိုစရာနေရာတွေကို အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းများဖြင့် အခမဲ့ဘိုကင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အလွယ်တကူဘိုကင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ - ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ဟိုတယ်တွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာဘယ်လိုရှာရမလဲစဉ်းစားနေပါသလား။ အွန်လိုင်းဟိုတယ်ဘိုကင်ဝက်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ Jovago နဲ့ဆို၊ Search Box ထဲမှာ သွားချင်တဲ့နေရာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ဖြင့် ၄င်းဒေသရှိဟိုတယ်များကို ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးဟိုတယ်တွေကိုရှာဖွေလိုက်ပါ , အသင့်တော်ဆုံးဟိုတယ်ဈေးနှုန်း တွေကိုရှာဖွေပြီး အွန်လိုင်းတွင်ဘိုကင်လုပ်လိုက်ပါ! မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေကိုရှာဖွေနေပါသလား? ပါကစ္စတန်က ဈေးနှုန်းသက်သာစွာတည်းခိုနိုင်မယ့် မိုတယ်၊တည်းခိုခန်းတွေကို ရှာဖွေနေပါသလား? ဒါမှမဟုတ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ ဈေးနှုန်း၊ ကြယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စသဖြင့် စီစစ်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ၀က်ဆိုက်ပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အပန်းဖြေစခန်းစတာတွေရဲ့ပုံကို click နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် ၄င်းတို့ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပုံနှင့်တကွတွေ့နိုင်တာကြောင့် သင်ဘိုကင်လုပ်မယ့် ဟိုတယ်အကြောင်းကို အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဟိုတယ်ရောက်မှ " ငွေပေးချေနိုင်ပါတယ် "
အသက်သာဆုံးဈေနှုန်းများနှင့် အကောင်းဆုံးလျော့ဈေးများ - တည်းခိုရန် ဟိုတယ်တစ်လုံးရှာဖွေနေပါသလား? ဘိုကင်လုပ်ဖို့ အချိန်မရှိခဲ့လို့ နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေရင်တောင် သင်ဟိုတယ်တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ သင်တည်းခိုမယ့်အခန်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။Jovago နဲ့ဘိုကင်လုပ်မယ်ဆိုပါက သင်ဟာ အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းတွေ၊ပရိုမိုးရှင်းတွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဘိုကင်လုပ်မယ့်နေရာတိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ခွဲတွေရှိပြီး ဟိုတယ်တွေနဲ့လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိတာကြောင့် သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ မြင်ရတဲ့ အရာနဲ့ အပြင်မှာတထပ်တည်းတွေ့ကြုံခံစားရမှာပါ။ တကယ်လို့သင်ဟာ ထပ်မံပြီးသိရှိလိုတာတွေရှိသေးပါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer service team မှ သင့်အားဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။
ဟိုတယ်ရောက်မှငွေပေးချေပါ။ - ယခုချက်ချင်းဘိုကင်လုပ်ပြီး အွန်လိုင်းက ငွေပေးချေခြင်း (သို့) ဟိုတယ်ရောက်မှပေးချေလို့လည်းရပါတယ်။ ငွေကို အခုဘဲ ပေးချေမလား သို့ နောက်မှချေမလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ် အာရှတစ်ဝှမ်းရှိဟိုတယ်တော်တော်များများတွင် Credit Card မလိုဘဲပေးချေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် သင်ဟိုတယ်ကိုမရောက်ခင် ပေးချေစရာမလိုပါဘူး။ ဟိုတယ်ရောက်မှ ထိုဒေသရှိ ငွေကြေးစံနှုန်းထားအလိုက်ပေးချေနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနီးအနားရှိဟိုတယ် - သင့်ဖုန်းကနေအလွယ်တကူ ဘိုကင်လုပ်နိုင်မယ့် Jovago အက်ပလီကေးရှင်းလည်းရှိတာကြောင့် လိုအပ်တာနဲ့ချက်ချင်း ဘိုကင်လုပ်နိုင်တာကြောင့် အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းတွေကိုရှာဖွေပြီးသင့် မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်က အလွယ်တကူ ဘိုကင်လုပ်နိုင်မှာပါ။
ဟိုတယ်များ Lahore ဟိုတယ်များ Karachi ဟိုတယ်များ Murree ဟိုတယ်များ Islamabad ဟိုတယ်များ Faisalabad ဟိုတယ်များ Swat
ဟိုတယ်များ Rawalpindi ဟိုတယ်များ Naran ဟိုတယ်များ Multan ဟိုတယ်များ Peshawar ဟိုတယ်များ Muzaffarabad ဟိုတယ်များ Sialkot
ဟိုတယ်များ Yangon ဟိုတယ်များ Bagan ဟိုတယ်များ Mandalay ဟိုတယ်များ Ngwe Saung ဟိုတယ်များ Inle Lake ဟိုတယ်များ Chaung Thar
ဟိုတယ်များ Dhaka ဟိုတယ်များ Cox's Bazar ဟိုတယ်များ Sylhet ဟိုတယ်များ Chittagong ဟိုတယ်များ Bandarban ဟိုတယ်များ Uttara